Fomba fanadiovana momba ny tontolo iainana ho an'ny ampahany ao amin'ny Components China Manufacturer
Description:Soso-kevitra amin'ny fanadiovana momba ny tontolo iainana ho an'ny fitaovana,Tandindomin-doza ho an'ny Tontolo iainana,Fitaovana enti-manavakavaka momba ny tontolo iainana
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny singa sy ny ampahany > Fomba fanadiovana momba ny tontolo iainana ho an&#39;ny ampahany ao amin&#39;ny Components
Ny fanadiovana ny hydrofluoro ety dia fitaovana elektronika matanjaka (Water Incompatibility) ary vokatra avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara.
Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
1.HFE ny tebiteby sy ny viscosité ambony ambany, afaka miparitaka sy mizarazara amin'ny rihana sy ny poreuses isan-karazany, ary misy fiantraikany tsara amin'ny famonoana, fanasiana, famafazana sy fanadiovana;
2.HFE hydrofluoroether fanadio ny tontolo manodidina ny tontolo iainana, manana ODP ny sandan'ny 0 sy ny ambany ambany GWP ambany;
3. Manana tady mahamay (54 ℃), ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikorianan-tsakafo mandritra ny fandroana sy fanadiovana. zavatra tsy mampidi-doza, tsy mirehitra ary tsy misy solika, tsy misy afo na teboka;
6. Fanaovana elektrika tsara, ary afaka diovina amin'ny elanelana, ary afaka manatsara ny toerana azo ampiasaina;
7. Ny fanadiovana ny ranon-drano rehefa vita ny fanadiovana dia azo averina amin'ny alàlan'ny fanivanana, hampidina ny fatiantoka, hamonjy ny fandaniana.
Eco Friendly Cleaning Solutions Fomba fiasa ara-batemy ara-teknika:
Manadio ireo vata fampangatsiahana
Ity Hydrofluoroether Inert Clean Agent io dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Ity vahaolana ity ho an'ny fanadiovana dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry sy nentina.
Soso-kevitra amin'ny fanadiovana momba ny tontolo iainana ho an'ny fitaovana Tandindomin-doza ho an'ny Tontolo iainana Fitaovana enti-manavakavaka momba ny tontolo iainana